Εκμάθηση Βιρμανικά > Ελληνικά| Ξενοδοχείο | Μετάφραση
Εκμάθηση Βιρμανικά - Ξενοδοχείο
Ένα ξενοδοχείο ဟိုတယ် - ho tai
Διαμέρισμα တိုက်ခန်း - taikʔ kaN
Καλωσορίσατε! ကြိုဆိုပါတယ် - kyo sho pa tai
Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; အခန်းလွတ်ရှိပါသလား ခင်ဗျာ / ရှင် - ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; ရေချိုးခန်းပါလား - yé chō kaN pa lā
Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; တစ်ယောက်အိပ်ကုတင် နှစ်လုံး လိုချင်ပါသလား - thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
Θέλετε ένα δίκλινο; နှစ်ယောက်အိပ် အခန်းယူချင်ပါသလား - hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους ရေချိုးကန်ပါတဲ့အခန်း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန်း/ ရေချိုးခန်းပါတဲ့အခန်း - yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
Δωμάτιο με πρωινό မနက်စာပါတဲ့အခန်း - ma netɁ sa pa téi ah kaN
Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; တစ်ညဘယ်လောက်ကျလဲ - titʔ nya bet laukɁ kya lé
Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ အခန်းကိုအရင်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ - ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
Ναι, βεβαίως! ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါတယ် - hokʔ ké' , ya pa tai
Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο အခန်းကတော်တော်ကောင်းပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဘဲ - ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; ကောင်းပါပြီ၊ ဒီနေ့ညအတွက် အခန်းယူလို့ရမလား - kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ နေပါစေတော့၊ ကျနော့် အတွက်တော့ဈေးနည်းနည်းကြီးနေတယ်။ - nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; ကျနော့် ပစ္စည်းတွေသယ်လာပေးနိုင်မလား - kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; ကျနော့် အခန်းဘယ်မှာ ပါလဲ - kya nau ah kaN bai mha pa lé
Είναι στον πρώτο όροφο. နှစ်လွှာမှာပါ - hnit lewo mha pa
Υπάρχει ασανσέρ; ဓါတ်လှေခါး ရှိလား - datʔ lhé khā shiɁ lā
Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. ဓါတ်လှေခါး ဘယ်ဖက်မှာရှိပါတယ် - datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. ဓါတ်လှေခါး ညာဖက်မှာရှိပါတယ် - datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; ပင်းမင်းခန်းဘယ်မှာရှိပါသလဲ - hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
Στο ισόγειο မြေညီထပ် မှာပါ။ - myé nyi tatɁ mha pa
Ισόγειο မြေညီထပ် - myé nyi tatɁ
Δωμάτιο အခန်း - ah kaN
Καθαριστήριο ρούχων ပင်းမင်းဆိုင် - piN miN saiN
Κομμωτήριο ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်။ - saN piN nyut saiN
Πάρκιγκ ကားပါကင်။ - kā pa kiN
Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων အစည်းအဝေးခန်းဘယ်မှာလဲ။ - ah sī ah wai kaN bai mha lé
Αίθουσα συνεδριάσεων အစည်းအဝေးခန်း - ah sī ah wai kaN
Η πισίνα είναι θερμαινόμενη ရေနွေးတဲ့ ရေကူးကန် - yé nawai téi yé kū kaN
Πισίνα ရေကူးကန် - yé kū kaN
Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις7η ώρα, παρακαλώ; မနက် ခုနှစ်နာရီမှာ နှိုးပေးပါ - ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
Το κλειδί, σας παρακαλώ ကျေးဇူးပြုပီး သော့ပေးပါ။ - ké zū pyu pi thauʔ pé pa
Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ ကျေးဇူးပြုပီး ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ပေးပါ။ - ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
Έχω κάποιο μήνυμα; ကျနော့် အတွက် ဘာသတင်းပေးထားတာရှိပါလဲ - kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
Ναι, ορίστε ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာပါ - hokʔ ké' , di mha pa
Όχι, κανένα ရှင့်အတွက် ဘာမှမရှိပါဘူး - shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
Πού μπορώ να κάνω ψιλά; အကြွေဘယ်မှာလဲလို့ရမလဲ - ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; ပိုက်ဆံ အကြွေလဲပေးပါ ခင်ဗျာ - paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε ရပါတယ်၊ ဘယ်လောက်လဲချင်ပါသလဲ - ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé